Izindaba - Ukubambisana Okujabulisayo ku-IE expo China 2021
Ngo-Ephreli 22, IE expo China 2021 isiqedile eShanghai, China. Sisungule ubudlelwano obuhle bebhizinisi namakhasimende avela nxazonke zomhlaba ngokulingana.
Sikhombise eminye imikhiqizo ku-Fair, njenge umshini wensimbi we-fiber laser cutting machine, umshini wokusika ipayipi we-laser, ipuleti ne-tube laser cutting machinenjalo njalo. Ngenxa yekhwalithi ephezulu namanani okuncintisana, imikhiqizo yethu yamukelwa abathengi abaningi. Futhi amakhasimende amisiwe anikeze ukuhlolwa okuphezulu enkampanini yethu.
IGuohong Laser Technology (Jiangsu) Co, Ltd. ainkampani sa ngokukhethekile ucwaningo nentuthuko, ukukhiqizwa kanye nokudayiswa fibre laser cutting umshini. Sinezobunjiniyela kanye nabasebenzi bezobuchwepheshe nabaphathi abaphezulu abanolwazi cishe lweminyaka embonini yomshini wokusika we-laser.
“Ukwethembeka, ikhwalithi, ukuzibophezela kuyinjongo yethu enkulu, sizokunikeza ngemikhiqizo esezingeni eliphezulu nezintengo zokuncintisana. Okwamukelekile abangane abasemakhaya nababanzi babe nezingxoxo zebhizinisi nathi!